Iibhola zomlilo 3D, umntu olikhoboka lotywala kakhulu kunye nobuhle bobuhle | I-Androidsis
Iibhola zomlilo i-3D ibonisa ubuhle kunye nokulutha okunxibe ngokungaqhelekanga
I-VOODOO isungule iVenkile yokuDlala kuGoogle kwi eziqhelekileyo ezibizwa ngokuba ngumlilo Iibhola 3D oziphetheyo ngokwawo kufanele ukuba abe yinto eqhelekileyo. Ubuhle kunye nobuhle kuyilo, ngaphandle kokulibala ukuba likhoboka elinokubangela nakowuphi na umsebenzisi oqala ngalo kwidesktop yeselfowuni.
Kwaye nangona esi studio somdlalo wevidiyo sukuba ngcwele yokuzinikela kwam (kuluntu oluninzi kwimidlalo yabo), ngeli xesha bakwazile ukupapasha umdlalo kwiVenkile yokuDlala yeshumi. Yinto engaqhelekanga kwezi sithanda ukuziphucula kwaye ezinokuchaphazela kakhulu iingqondo zabadlali abaninzi.
1 Ubuhle kwi-aesthetics
2 Ungaze usilele
3 Iibhola zomlilo 3D yinto eqhelekileyo
Kwiibhola zomlilo 3D indibaniselwano enobulumko bezakhiwo ze3D nge-shading enika ubunyani obuchanekileyo ukuyenza ibonakale ngathi sikumhlaba owenziwe ngodongwe. I-aesthetics ebonakalayo ibalasele kwaye iyakwazi ukucaphukisa uninzi lweemvakalelo kumdlali ngelixa ubetha isakhiwo se-cylindrical ngenani elikhulu leebhola.
Yonke into ikhulelwe ngobunyani ngokugqibeleleyo Ingasetwa kwimovie yePstrong njengoko inokuba Ibali leToyi. Zonke ezoopopayi zivelisa ubume bobuchwephesha kunye neziphumo ezihamba nazo, zenza imvakalelo yokudlala isihloko esisodwa; ngokufana nepeyinti Hit kwezinye izinto.
Ukuba sidibanisa kule a ukubandakanyeka koomatshini bokudlala, Sele sinalo ihashe eliphumelelayo ekufuneka siphumelele ngalo kugqatso emva kogqatso kwiVenkile yeGoogle Play. Umdlalo olula kakhulu kwaye kufuneka sibethe eso sakhiwo sombindi ngenani leebhola. Ukuba nangasiphi na isizathu, sibetha ezo zithintelo zijikeleze bona, umdlalo uphela kwaye ngokuqinisekileyo, kwi-90% yamatyala, siya kufumana ukubhengezwa okungathandekiyo.
Ukuba awuyithathi nzulu nangasiphi na isizathu kwaye ubambeke kwiibhola zomlilo 3D, zilungele bukela uninzi lweevidiyo kwimizuzu nje embalwa. Kungcono ke ukuba unxibe iiovaroli zakho ukuzama ukubetha ngobuchule eso sakhiwo sombindi.
Njengoko sidlula amanqanaba, izinto zizakuba nzima, nangona ingekho kangako njengoko sinqwenela, kuba sinokulindela utshintsho kwicala lokuhamba kwale miqobo ingwevu. Ukuze ivele ngakumbi kwaye kufuneka sibenakho ukubetha okwaneleyo ukubetha ulwakhiwo oluya kusivumela ukuba sidlule kwinqanaba.
Kwaye njani umdlalo weqonga ulikhoboka kunye ne-aesthetics ebonakalayo eqhutywe kakuhle, i-VOODOO ayikaze izame ukuba uvule umxholo omtsha. Izinzile ngokufaka imibala kumanqanaba ahlukeneyo ukuya kuthi ga kwimixholo eyahlukeneyo engama-20, ke lungela umnyhadala wemibala ye-pastel eya kudlula phambi kwakho kwiscreen sakho esiphathwayo.
Iibhola zomlilo 3D yinto eqhelekileyo
Kwaye oku ngeeMlilo Iibhola 3D. Akukho nto ingaphaya komntu oqhelekileyo onokuzonwabisa okomzuzu okanye emibini ngelixa ulinde emgceni kwiziko, okanye loo nto yiya kudlala imidlalo engaphezulu kweshumi lemizuzu apho uya kwinqanaba elilandelayo kwaye ufumane ubunzima ngakumbi. Nangona ngokwenene ubunzima yintengiso ngokwayo. Intengiso onokuyisusa ukuba uyafuna.
Ngokobuchwephesha, ngakumbi kwimbonakalo ebonakalayo, kuyamangalisa ukukwazi ukudlala umdlalo kwaye ubone ukuba ezo zakhiwo ze-cylindrical zenziwa njani phambi kwakho kunye nokuba lonke ilizwe le-3D ngobulumko lidluliselwe njani kulo mdlalo. Ngokubhekisele kubuchwephesha ngakumbi, njengokubhampisa iibhola okanye intshukumo, konke kugudile ngaphandle kokungasebenzi. Kwaye ngu umdlalo obonakala ngathi ukuthumelela imiyalezo ye-telepathic apho kuthiwa: "Qhubeka udlale, qhubeka udlala."
I-VOODOO ikwazile ukumilisela umdlalo oqhelekileyo kwiVenkile yeGoogle yokuDlala ngeBhola yoMlilo 3D. Uya kuyithiya intengiso, ke ukuba uyabathanda kwaye unotshintsho epokothweni yakho, qhubeka usike intengiso eyintombazana epokothweni yakho.
Iibhola zomlilo i-3D
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Iibhola zomlilo i-3D ibonisa ubuhle kunye nokulutha okunxibe ngokungaqhelekanga